Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Qiiq sun ah ayaa hareeyay Delhi ka dib ciida Hinduuga
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Qiiq sun ah ayaa hareeyay Delhi ka dib ciida Hinduuga.
Delhi waxay leedahay tayada hawada ugu liidata caasimadaha aduunka oo dhan, laakiin akhrinta jimcaha ayaa si gaar ah u xumayd sababtoo ah dadka degan magaaladu waxay u dabaaldegeen Diwali, ciida Hinduuga ee nalalka, habeenkii Khamiista.
Subaxnimadii Jimcaha, Tilmaanta Tayada Hawada ee Hindiya ayaa kor u kacday, iyada oo gaadhay 459 yaab leh oo cabbirkeedu dhan yahay 500.
Wasakhda ka dhacday Delhi Jimcihii ayaa ugu yaraan 10 jeer ka sarraysay wasakhda London.
Isku-duubnaanta walxaha sunta ah ee PM2.5, oo sababi kara cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, ayaa sidoo kale ku dhuftay heerar aad khatar u ah.
Tilmaanta tayada hawada ee Hindiya ayaa kor u kacday, iyada oo gaadhay 459 cabir dhan 500 maanta, taas oo muujinaysa wasakhowga hawada 'daran' - tirada ugu badan ee la diiwaan geliyo sanadkan.
Sida laga soo xigtay ilaha internetka, wasakhdu waxay ku jirtaa Delhi ayaa ugu yaraan 10 jeer ka sarreeyey tii London maanta.
Dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee Hindiya ayaa subaxnimadii Jimcaha ku soo toosay magaaladooda oo ay huwan tahay qiiq sun ah, ka dib markii dadka mushtamaca ah ay ka horyimaadeen mamnuucidda isticmaalka rashka xilli malaayiin qof ay u dabbaal degeen habeenkii Hinduska ee nalalka.
Isku-duubnaanta walxaha sunta ah ee PM2.5, oo sababi kara cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, ayaa sidoo kale ku dhuftay heerar aad khatar u ah. Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu u arkaa heerka PM2.5 ee ka sarreeya shan mikrogram-ka mid aan ammaan ahayn, haddana Jimcihii, magaalada 20-milyan ee xoogga leh waxay aragtay celceliska akhriska magaalada oo dhan inuu gaaray 706 micrograms. Indian Express ayaa sheegtay in heerarka PM2.5 ay qiyaaseen 1,553 mikrogram saacadu markay ahayd 1am jimcihii.
Sawirada Delhi online-ka la wadaago ayaa muujinaya qiiq cufan oo cufan oo ku nasan meel ka sarreysa caasimadda, iyadoo muuqaal ahaan aad loo yareeyey.
Delhi ayaa leh tayada hawada ugu liidata dhamaan caasimadaha aduunka, laakiin akhrinta jimcaha ayaa si gaar ah u xumayd sababtoo ah dadka magaalada ayaa u dabaal dagay Diwali, ciida Hinduuga ee nalalka, habeenimadii Khamiista. Qaar badan ayaa diiday mamnuucida rashka, iyaga oo ku daray qiiq badan oo sun ah hawo ay horay ugu sumoobeen ilo wara-dheer.
Iyadoo dhaqanku uu aad u xaddidan yahay, dabka xaabada - habka ulakac dab loogu shido dalagyada hadha si loogu diyaargaroobo wareegga xiga - ayaa sidoo kale gacan ka geysta heerarka dilaaga ah ee wasakhowga hawada xilligan ee sanadka. Xilliga Diwali-ga ayaa ku beegan xilliga dabka, maadaama xafladda la qabto dhammaadka xilliga xagaaga.
Sida laga soo xigtay SAFAR, hindise la socodka tayada hawada oo ay hoos imanayso Wasaaradda Sayniska ee dawladda dhexe ee Sayniska Dhulka, dabka xaabada ayaa gacan ka geysta 35% ee heerarka PM2.5 ee Delhi.
Jimcihii, ayaa laga digay Delhi dadka deegaanka in aysan samayn jimicsi oo ay ka fogaadaan socodka. Waxay sheegtay in waji-xidhaha boodhka aanay bixinayn difaac ku filan waxayna ku talisay in dhammaan daaqadaha la xidho oo guryaha aan la faaruqin, taa beddelkeedana la nadiifiyo.